DAAWO:- Deni oo kahadlay Duruufaha Somala kahaysta Dhismaha Ciidan Tayo leh “Hadda lama hayo Ciidamo sax ah” | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
DAAWO:- Deni oo kahadlay Duruufaha Somala kahaysta Dhismaha Ciidan Tayo leh “Hadda lama hayo Ciidamo sax ah”
Madaxwaynaha Maamulka Puntland Siciid Cabdillaahi Deni oo ka hadlayay Shir jaraa’id oo uu caawa ku qabtay Xarunta madaxtooyada ee magaalada Garoowe ayaa kahadlay arimo kusaabsan CIIDANKA XOOGA DALKA IYO DHISMIHIISA.
Maanta oo ay ku beegneyd 12ka April ayuu deni udiray hambalyo ciidanka xooga dalka waxaase uu sheegay in ay jiraan caqabado badan oo hortaagan in somali ay yeelato ciidan awood leh oo midaysan.
Previous articleDAAWO:- Degdeg DFS oo shaacisay kiisas cusub oo kusaabsan Coronavirus “Tirada oo gaartay 25Kiis”.
Next articleXaaf oo si rasmi ah xilka ugu wareejiyay Madaxwayne Qoorqoor kadib xaflad kooban oo dhacday.
Boodhari April 12, 2020 At 10:57 pm
Siciid Deni doqon guuxiisa aad uga dheereynaya xaqiiqdii. Isaga waxaa loo doortay in uu Puntland madaxweyne u noqdo oo uu shacabka Puntland ahamiyadda koowaad siiyo. Dagalkiisii oo uusan waxba ku soo kordhinin ayuu ciidan qaran iyo wax aan khuseynin dadka waqtiga kaga lumminayaa.
Ha ka hadlo waxa uga qorsheysan sidii uu waxsoosaarka Puntland u dhaqaajin lahaa. Ha ka warramo sida uu shacabkiisa uga haqabtiri lahaa baahiyaha sida hooy la’aanta, macluusha, faqriga, daryeelka caafimaadka iyo waxii soo raaca. Ha ka sheekeeyo himilooyinka cusub ee la hiigsan karo ee uu Puntland u hayo.
Arrimaha qaranka Deniyoow afhayeen iyo qareen midna u ma tihid ee waxa adiga iyo dagalkaaga khuseeya ka soo tali. Tiisa daryeelaa tu kale ku darsada. Sool iyo Sanaag meel ku sheeg oo Mudug meel ku sheeg.
Asha April 13, 2020 At 9:25 am
Xaarfirdhiye enegu waa isnaqaana mashaani meshaani waa web babaliga wasakhdii aad fidhiyo sharacya iswedhan ama Eskilstuna aad lataagneyd meeshaan loogamabaahna hadii farmaajo xooga aad dargiska kucabto ku siiyey hala soofarisan halkaan adebyeelo
Xoriyo Ibrahim April 13, 2020 At 11:14 am
Bodhari ninka isu bixiyeyey waa nin nabar iyo naxdin u shaqeeya oo kistiisa xalaaleysanaya aduunkana aan warkahayn kasookale looma jawaabo mudo dhawrsano ayuu meediyaa ka cabadayey reerka maxamuud salebaan nin uu ku waashey maxay u dhimeen waa xanuunsanayaa
Ahmadey April 13, 2020 At 3:41 pm
Waa boodhari wuxuu ka hadlay,waa sax ninkaani waa ilaaway wixii ku waajib ahaa iyo hawsha isaga utaal.
Ciidan qaran shaqo kuma laha,kuwa halka qabiil ah ee uu madaxda u yahay buu ku fillaan waayey,qurun iyo eexna ku kala dilay.
Maanta soomaaliya ciidan soomaaliyeed baa u dhismaya ,kaas oo qabiil iyo qurunka maamuladu rabaan ka duwan,kuwa qabiilku dishay ee deni kow ka yahay waxa rabaan inay ciidanka qoondo qabiileysan lagu soo xulo,maanta ciidanku saas kuma socdo,waa isku dhaf ku yimid rabitaan kamid noqoshada ciidamada,waxaa si iskood ah ugu biiray dhalinyaro kasoo kala jeeda dhammaan gobolada soomaaliya(min raas kambooni illaa raas caseyr).
Kuwa cuqdada qabaa (sida deni) ha iska hubiyeen inta aysan iska hadlin.
Asha April 14, 2020 At 7:49 am
Xaarfidhiyow farmaajo haduu weji kuu hayo kismaajo lacag kuma bixiyeen dad kaa ciribtira xasuuqa maatadaada masaakiintaa ee xoolo dhaqatadaa marka waxaan kuleyahay adigu sandareertadad jeceshay farmaajona isirkaaguu necabyahay sool iyo sanaag muxuu tarey cabudwaaq iyo gedo maxuutaray dhuldarood maxuu uaqabtey farmaajo waa cadowga isirka darood hartikalya cadw uma aha